K: စာစီစာကုံး (သို့) သွေဖယ်တတ်သည့် ခေါင်းစဉ်များ
စာစီစာကုံး (သို့) သွေဖယ်တတ်သည့် ခေါင်းစဉ်များ
တလုံး နှစ်လုံး စာစီကုံး xxxx ကျောင်းသားတွေ တပြုံးပြုံး xxxx ပြုံးပျော် ရွှင်မြူးကြလို့သာ… ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ xxxx
မြန်မာ့အသံက နံနက်ချိန်ခါ တေးသံ မှာ ၊ အဲဒီသီချင်းလေး လာတဲ့ အချိန်လောက်ဆိုရင် ၊ ကျမ တို့ ညီအမ တွေ ၊ မနက်စာ ထမင်းကြမ်း စားတဲ့ ပန်းကန်တွေကို သိမ်းသူက သိမ်း ။ စာအုပ်တွေကို ပြန်စီပြီး လွယ်အိတ်ထဲ ထဲ့တဲ့သူက ထဲ့ ။ ကျောင်းစိမ်းလုံခြည် နဲ့ အကျီ င်္အဖြူ တထည်ကို အ၀တ်ပုံထဲမှာ ရှာဖွေ မွှေနှောက်တဲ့ သူက နှောက် နဲ့ ကျောင်းသွားဖို့ ဒရောသောပါး ဖြစ်နေကြပြီ။
ဖွင့်ထားတဲ့ ရေဒီယိုကနေ (တုန်...တုန်း .. တုန့် .. တုန် )၂ ဆိုတဲ့ စံတော်ချိန် တီးလုံး သံ ထွက်လာပြီး ၊ အခုချိန်က စပြီး သတင်းများကို ကြေငြာပါတော့မည် ဆိုရင်တော့ ၈ နာရီ ထိုးပြီမို့ ၊ သနပ်ခါးလည်း ခြောက် ၊ ခေါင်းကို အမြန်ဖီးလိုက်ပြီး ကျောင်းသွားဖို့ အသင့် ဖြစ် နေရပြီ ။ နံဘေးအိမ်က အမ တ၀မ်းကွဲ လည်း ၊ ခြံရှေ့ကို ရောက်နေပြီ။ ပြီးရင် ကျမ တို့ ညီအမ တသိုက် ၊ မြို့ပြင် ရန်ကုန်-ပြည် ကားလမ်းမကြီးပေါ် မှာ ရှိတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းကြီးကို ၊ ဖြတ်လမ်း ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်-ပြည် မီးရထားလမ်းကြီး ဘေးကနေ လမ်းလျှောက် သွားကြသည်။ ကိုးတန်း ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့ အမ နဲ့ ဟိုဖက်အိမ်က ရှစ်တန်း ကျောင်းသူ အမ ၀မ်းကွဲက ၊ စကားတပြောပြောနဲ့ လျှောက်ကြသည်။ ခြောက် တန်းကျောင်းသူ နို့ ညှာ အမ နဲ့ ငါး တန်းကျောင်းသူ ကျမက တော့ ၊ မီးရထားလမ်းပေါ်တက်ပြီး ဇလီဖားတုံးများကို ရေတွက်ရင်း ခြေလှမ်းခြင်း ပြိုင်လျှောက်ကြသည်။ နောက်မှာ ပြတ်ကျန်ခဲ့တဲ့ အမ နှစ်ယောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက် လို့ ၊ မီးရထားလမ်း တလျှောက်လုံး အဖြူ နဲ့ အစိမ်းလေးတွေ ဖွေးနေတာကို မြင်ရရင် ကျောင်းကို အချိန်မီ ရောက်မည် ဆိုတာ အလိုလို နားလည်ရသည်။ တခါတလေ အိမ်က ထွက်တာ နောက်ကျသွားရင် ၊ မီးရထားလမ်းဘေးမှာ လူ တယောက်မှ မရှိတော့ပဲ ၊ ၈ နာရီ ခွဲ မှာ ဖြတ်သွားတတ်တဲ့ စာပို့ ရထား ကြီး ကိုတောင် ၊ သတိထားပြီး လမ်းလျှောက်ရ တော့ပြီ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ၊ မြန်မာစာ ဆရာမ ပေးလိုက်တဲ့ အိမ်စာကြောင့် ၊ တနင်္လာနေ့ ကျောင်းဖွင့်ရက် မှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေလေသည်။
ငါးတန်း အတန်းပိုင် မြန်မာစာ ဆရာမ က၊ စာစီစာကုံး တပုဒ်စီ ရေးခဲ့ရမည် လို့ ဆိုသည်။ စာစီစာကုံး တပုဒ်ဖြစ်ဖို့ ၊ နိဒါန်းရယ် စာကိုယ်ရယ် နိဂုံးရယ် သုံးမျိုး ပါရမည် လို့ အသေအချာ ရှင်းပြသည်။ ခေါင်းစဉ်က “ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျောင်းသားဘ၀” ဖြစ်သည်။ စနေ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်လုံး ၊ သူများတွေ ဆော့ဖို့ ခေါ်တာတောင် မလိုက်ဖြစ် ပဲ ၊ အိမ်နောက်ဖေးက လှေခါးလေးပေါ်မှာ စာအုပ် နဲ့ ဘောပင် အသစ်ကလေးကို ကိုင်ပြီး ၊ စာစီစာကုံး ဘယ်က စ ရေးရမည်လဲ လို့ ၊ စဉ်းစားခန်း ၀င်နေသည် မှာ ၊ နှစ်ရက်တောင် ရှိပြီ။ မနက်ဖန် တနင်္လာနေ့ ကျောင်းတက်ရင် စာအုပ်ထပ်ရတော့မှာ ။ နိဒါန်း နှင့် စရမည် ဆိုတော့ နိဒါန်းကို ဘယ်လို စရေးရမည်မလဲ လို့ တွေးရင်း ခေါင်းရှုပ်လာသည်။ နိဒါန်းဆိုတာ ကရော ဘာလဲ ။
မလှမ်းမကမ်းမှာ ၀တ္တုထိုင်ဖတ်နေတဲ့ အမကြီးကို လှမ်းမေးတော့ ၊ နိဒါန်းဆိုတာ နိဒါန်း အစပေါ့ ဟဲ့ . . . တဲ့ ဆိုပြီး သူ့ကို မျက်မှောင်ကျုံ့ ကြည့်တာ ခံ ရသည်။
အစ ။ ဟုတ်သည်။ အစ ကနေ စ ရေးရမည် ပေါ့ ။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျောင်းသားဘ၀ ရဲ့ အစ ဆုံး အရာ က ဘာလဲ လို့ ၊ ဘောပင်အပြာလေးကို တချောက်ချောက် နှိပ်ရင်း စဉ်းစားလိုက်တော့ ၊ မနက် စောစော ရေဒီယိုက လာတဲ့ သီချင်းလေး က၊ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရောက်လာသည်။
တလုံး နှစ်လုံး စာစီကုံး ကျောင်းသားတွေ တပြုံးပြုံး xxxxx ပြုံးပျော် ရွှင်မြူးကြလို့သာ ၊ ကျောင်းသင်ခန်းစာ မှာ xxxxxx
အခုတော့ ၊ ပထမဆုံး စာစီစာကုံး တပုဒ်ရေး ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ၊ ငါးတန်းကျောင်းသူ ဘ၀ ကနေ၊ လွန်မြောက်ခဲ့သည်မှာ ၊ အတော်ပင် ကြာခဲ့ချေပြီ။ အက်ဆေး လို့ အသံထွက်ပြီး ၊ အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါ အထားအသို မှန်အောင် အဓိက ထား ရေးကျင့်ရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူ ဘ၀ သည်လည်း ၊ အတိတ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။
အခုအချိန်မှာ ၊ အက်ဆေး တပုဒ်လောက် စာမူ ရေးပေးပါ လို့ ၊ ပြောလာတဲ့ အခါ ၊ ကျမ စာစီစာကုံး လို့သာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဘာသာပြန် ပြစ်လိုက်သည်။ စာမူ ဆိုတာ ၊ စာရေးဆရာ တွေကိုသာ တောင်းခြင်းဖြစ်သည် လို့ လောဂျစ် သဘောအရ ကျမတွက်ချက် ကြည့်မိသည်။ ကျမ မှာ လောလောဆယ်ဆယ် စာမူ မရှိပေ။
ဘယ်ဆရာမ ကမှ အိမ်စာပေးလိုက်တာ မဟုတ်ပဲ ၊ ကျမ ဖာသာ ပျော်ရွှင် လွတ်လပ်စွာ ရေးထားခဲ့တဲ့ စာစီစာကုံးတွေ တော့ အပုဒ်ပေါင်း လေးရာကျော် လောက်၊ ကျမ ကိုယ်ပိုင် ဖွင့်လို့ ပိတ်လို့ ရ တဲ့ ၊ စာမျက်နှာလေး တခု ပေါ်မှာ ရှိပြီး နေခဲ့ပြီ။
တခုပဲ ရှိသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက စာစီစာကုံးတွေ သည်၊ ခေါင်းစဉ် သတ်မှတ် ပေးပြီးသား ဖြစ်သည်။ ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် ထဲမှာ မ၀င် ၀င်အောင် ရေးရသည်။ ခေါင်းစဉ် အောက်က လွတ်သွားလျှင် ၊ အမှတ်ကောင်း မရ နိုင် သလို ၊ ဆု နဲ့လည်း လွဲချော်နိုင်သည်။ အခုတော့ ကျမ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် မလိုပေ ။ သိမိ နားလည် ခံစားရ တာတွေကို ၊ စိတ်အလျဉ် အတိုင်း စီးမျောရင်း ၊ တစုံတရာက ခေါ်သွားတဲ့ အတိုင်း လိုက်ရေးသည်။ နိဂုံး ချုပ်ပြီး သွားတဲ့ အချိန်မှာ ခေါင်းစဉ် တခု အလိုအလျောက် ရလာတတ်မြဲ ဖြစ်သည်။ တခါတလေ လည်း ၊ ခေါင်းစဉ် တခု တပ်ပြီး ရေးလာခဲ့ပေမဲ့ ၊ အဆုံးသပ် နား ရောက်တဲ့ အခါ ၊ တခြား ခေါင်းစဉ် တခု ဖြစ်ချင် ဖြစ်သွားတတ် ပြန်သည် ။ သြော်. . . နိဂုံး နဲ့ အဆုံးသတ် က အတူတူပဲ လို့ ပြောရင် ငါးတန်းကျောင်းသူလေး တယောက်ယောက်များ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေလေ ဦး မလား ။
တကယ်တော့ ဘ၀ ရဲ့ စာမျက်နှာ တွေ ဆိုတာလည်း ရေးရင်း ရေးရင်း ခေါင်းစဉ်ကနေ သွေဖယ် သွားတတ်တာ မျိုး ပဲ မဟုတ်လား ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နိဂုံး ချုပ် အဆုံးသတ်ပြီးရင်တော့ ခေါင်းစဉ် တခု သေချာပေါက် ရ လာ ပါလိမ့်မည် ။
ဒါဆိုရင် ဒီ “စာစီစာကုံး” လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ခဲ့တဲ့ စာစီစာကုံးလေး ကို သွေဖယ်တတ်သည့် ခေါင်းစဉ်များ လို့ ကျမ ပြောင်းချင်သည် ။
( ၈ နာရီ ၂၀ မိနစ် - ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်)
သြဂုတ် ၃၁ ၊ ၂၀၁၄
( dedicated for bloggers and blog writers)
ဘ၀ရဲ့စာမျက်နှာတွေဟာ ရေးရင်းသွေဖီလေ့ရှိတာ အမှန်ပဲ ကေသွယ်ရေ။ ကိုယ်တိုင်ပြုစု ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ ‘သွေဖယ်တတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်’ အပုဒ်လေးရာကျော်အတွက် အားကျမိပါရဲ့။ မဆုံတာကြာပေါ့ သတိရတယ်။ ♥♥♥
ကေ့စာလေးဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က စာစီစာကုံးလေးတွေ ရေးတာ လွမ်းသွားတယ်... ငယ်တုန်းက တို့ ကျောင်းသားမှာ အရွေးခံရတဲ့ စာစီစာကုံးလေးတွေဆို သဘောကျလွန်းလို့အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဖတ်ရတာ... ၀ါကျတိုလေးတွေ အနက်တူပြီး ဖွဲ့ ပုံကွဲအောင် ဖွဲ့ တတ်တာလေး အားကျလွန်းလို့အသဲအသန်ကျင့်ခဲ့ဖူးတယ်... ကေ့စာစီစာကုံးလေးရာကျော်ရေးအားကိုတော့ အရမ်းလေးစားမိတယ်... Happy Blog Day Kay!
ဆက်လက်ပြီး သွေဖယ်နိုင်ပါစေ မကေ။
myo nyunt said...
Dear Thamee K Thwel, good blog. For me itsawindow, that I can look into. Especially what others "take" on art, literature and political problematics of the Burmese people andacountry called Burma. With Metta. Ba Ba U Myo Nyunt. Perth. Off to Myanmar again in October- 29th till Novem 24th.
ငယ်တုန်းက စာစီစာကုံးရေးတာ သိပ်ဝါသနာပါခဲ့တာကို ပြန်သတိရသွားတယ်...း)